29 Ndị Filistia+ wee kpọkọta ndị agha ha niile n’Efek. Ma ndị Izrel mara ụlọikwuu ha n’akụkụ isi iyi dị na Jezril.+ 2 Ndị isi+ ndị Filistia nọ na-agafere n’ìgwè dị otu narị mmadụ otu narị mmadụ nakwa n’ìgwè dị otu puku mmadụ otu puku mmadụ, Devid na ndị ikom ya so Ekish na-agafe mgbe ha gafesịrị.+ 3 Ndị isi ndị Filistia wee malite ịsị: “Gịnị ka ndị Hibru+ a bu n’obi?” Ekish wee gwa ndị isi ndị Filistia, sị: “Onye a ọ́ bụghị Devid onye na-ejere Sọl eze Izrel ozi, onye mụ na ya nọrọ n’ebe a otu afọ ma ọ bụ afọ abụọ,+ ahụghịkwa+ m ihe ọ bụla o mere malite n’ụbọchị ọ gbakwutere m ruo taa?” 4 Ndị isi ndị Filistia wee weso ya iwe; ndị isi ndị Filistia wee sị ya: “Gwa nwoke a laghachi,+ ka ọ laghachi n’ebe i nyere ya; ekwela ka o soro anyị jee agha, ka ọ ghara iguzogide+ anyị n’agha ahụ. Gịnị ka onye a ga-eji mee ka ya na onyenwe ya dị ná mma? Ọ́ bụghị isi ndị ikom anyị? 5 Onye a ọ́ bụghị Devid onye ha nọ na-agbara egwú, na-agụkwa, sị, ‘Sọl egbuwo puku kwuru puku, Devid egbuwokwa iri puku kwuru iri puku’?”+ 6 Ekish+ wee kpọọ Devid, sị ya: “Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ ị bụ ezigbo mmadụ, ọpụpụ i so m na-apụ na mbata i so m na-abata+ n’ebe anyị mara ụlọikwuu dị m mma;+ n’ihi na ahụghị m ihe ọjọọ i mere malite n’ụbọchị ị bịakwutere m ruo taa.+ Ma ndị isi+ na-ele gị anya ọjọọ. 7 Laghachi, laakwa n’udo, ka ị ghara ime ihe ọ bụla dị njọ n’anya ndị isi ndị Filistia.” 8 Otú ọ dị, Devid sịrị Ekish: “Gịnịkwanụ ka m mere,+ gịnịkwa ka ị hụrụ ohu gị mere malite n’ụbọchị m nọwara n’ihu gị ruo taa,+ nke mere na mụ agaghị abịa lụso ndị iro onyenwe m eze ọgụ?” 9 Ekish wee zaa Devid, sị: “Amaara m nke ọma na ị bụ ezigbo mmadụ n’anya m, dị ka mmụọ ozi Chineke.+ Ọ bụ naanị na ndị isi ndị Filistia asịwo, ‘Ya esola anyị aga agha.’ 10 Bilie n’isi ụtụtụ, gị na ndị na-ejere onyenwe gị ozi, bụ́ ndị so gị bịa; bilienụ n’isi ụtụtụ mgbe unu hụwara ìhè. Lawanụ.”+ 11 Devid wee bilie n’isi ụtụtụ, ya na ndị ikom ya, ka ha lawa n’ụtụtụ+ wee laghachi n’ala ndị Filistia; ndị Filistia wee gbagoo Jezril.+